पढेको कुरा हुवहु सम्झिन यि कुरामा ध्यान दिनुहोस, कुनैपनि परिक्षामा असफल हुने चान्स छैन ! — KhabarTweet
प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर ०४, २०७५ समय: १४:५६:१२
पढेको कुरा विर्षने समस्या छ? अब चिन्ता नलिनुहोस् । हुने त पढेको कुरा दिमागमा नबस्दा विद्याथीहरु झन् चिन्तित हुन्छन् । आफ्नो क्षमता कम भएको अनुभव हुन्छ । जसले असफलता बनाउँछ । दिमाग सक्रिय छ भने एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा पढ्दा वा सुन्दा तिनमा चासो लिन सक्नेछौं।
‘म यो जानकारी आफ्नो जीवनमा कहिले र कसरी लागू गर्न सक्छुरु यो जानकारी अरूलाई मदत गर्न कसरी प्रयोग गर्न सक्छुरु’ एक९ एक शब्दको साटो शब्दहरूको समूह अर्थात् वाक्यांशहरू पढ्दा पनि तपाईं अझ राम्ररी बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईंले कुनै पनि जानकारी वा त्यसको मुख्य बुँदा झट्टै बुझ्न सक्नुहुन्छ र सम्झन झनै सजिलो हुन्छ।
६. महत्त्वपूर्ण कुराहरू मनन गर्नुहोस्
धेरैजसो पढाइमा टप गरेका व्यक्तिको पढाई शैली हेर्दा उनीहरूले चार्ट बनाएर पढ्ने गरेको देखिन्छ । जस्तै करबारे पढ्दै हुनुहुन्छ भने करको परिभाषाका प्रका
रलाई चार्ट बनाएर पढ्दा सहजै सम्झन सकिन्छ ।